Home Ulo oru Europe Haris Seferovic Childhood Story Plus Ihe Ntinye Ucheld Biography
Haris Seferovic Childhood Story Plus Ihe Ntinye Ucheld Biography. Ebe E Si Nweta Nye Amaara Gị na CelebrityUnfold na OltnerTagblatt
LB na-enye akụkọ zuru oke nke Football Genius na aha ya "Haris“. Anyị Haris Seferovic Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama sitere na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Akụkọ akụkọ nwata Haris Seferovic- Nyocha rue ụbọchị. Ebe e si nweta ya nyefe ahịa
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye egwu na-enweghị atụ, onye ọ bụ onyinye-ebube nke nwere anya maka itinye ihe mgbaru ọsọ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole nke ndị na-eche egwu na-atụle akụkọ ndụ Haris Seferovic nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Haris Seferovic Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
A mụrụ Haris Seferovic n'ụbọchị 22nd nke February 1992 na nne ya, Sefika Seferovic na nna, Hamza Seferovic na Sursee, ime obodo na Switzerland. N'okpuru ebe a bụ foto nke nne na nna ya mara mma; ya anya nna (Mustafa) na ezigbo mama (Sefika).
Ndị nne na nna Haris Seferovic- Mama Sefika Seferovic & papa, Hamza Seferovic. Ebe e si nweta ya Record
Na-ekpe ikpe site na aha ha (Mustafa na Sekina), ị nwere ike ịgwa ya na ọ ga-ekwe omume nne na nna Haris Seferovic sitere na ezinụlọ ma ọ bụ agbụrụ ndị Alakụba.
Aha nna ya Mustafa bụ aha Al-Qurani na-apụtaghị maka nke pụtara “a họọrọ”. Ọ bụ otu n'ime aha nke Onye Amụma Alakụba. N'aka nke ozo, aha nne ya “Sefika” bu asusu Turkey, aha nke putara “obi ebere".
Mmalite nke Haris Seferovic:
Haris Seferović nwere ezinụlọ ya BỤGHỊ na Switzerland, MA bidoro n’otu obodo na obodo akpọrọ Sanski-Kasị, nke dị na Bosnia na Herzegovina, nke bụbu Yugoslavia.
Ị maara?… Ndị nne na nna Haris Seferovic kwagara Switzerland na ngwụsị 1980, n'oge a WAR nke butere egwu na eti eti na Bosnia na Herzegovina.
Ihe omume tupu amụọ Haris Seferovic na ndụ ya. Ebe E Si Nweta nye Warosu
Nnukwu mkpebi nne na nna ya mere ịhapụ obodo agha tisasịrị nke ọma na-atụle eziokwu ahụ bụ na agha ahụ bidoro na 6th nke Eprel 1992, nanị ọnwa abụọ ka amụrụ obere Haris (nke esere n'okpuru).
Foto nke Haris Seferovic dị ka nwatakịrị. Ebe e si nweta ya OlterTagblatt
N'oge ọ bụ nwata, Haris Seferovic na-eto eto nwere onyinye nke ịgba bọl bọl. Na-etolite, ọ malitere ịgba bọlbụ ụlọ ya n'ụlọ ezumike, egwu nke na-egosipụta ikike ya na ịhụnanya maka egwuregwu mara mma.
Haris Seferovic Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Nkụzi na ịrụ ọrụ
N'oge ahụ, ndị nne na nna Haris Seferovic maara na a kara aka na nwa ha nwoke ga-abụ nnukwu ihe ka ha na-ele Harris na-etinye nkà ya ma n'ụlọ yana n'egwuregwu Sursee football.
Ọ kachasị mma, inwe mmụọ na-ahụ n'anya na egwuregwu na-akwado nne na nna, ọ bụ ihe dị mma maka egwuregwu a mara mma etinyere n'ime ya dịka nwatakịrị.
Nwa Haris Seferovic na-eto eto gara n'ihu jiri obi ike na-egwu bọọlụ, na-etolite omume nke imebi akara ya na iji bọọlụ ya na-eme ihe na-acha anụnụ anụnụ.
Toohụ nke ukwuu, ndị otu ezinụlọ dụrụ ya ọdụ ka ha debanye aha maka ule bọọlụ. Mgbe Haris degara ọkpụkpọ oku mbụ ka ọ gaa ule na ụlọ akwụkwọ Sursee dị na mpaghara, mpako nke nne na nna ya nke na-enweghị njedebe.
Haris Seferovic Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Ndụ Ndụ Mmalite
Mmasị Haris Seferovic nwere maka bọl hụrụ ya n'afọ 1999 na-agafe ọnwụnwa wee malite ọrụ ya na ndị ntorobịa FC Sursee, klọb nke nyere ya ohere ịtọ ntọala ọrụ ya.
Ọ na - eme ngwa ngwa inwe mmata na klọb ahụ ka o ji ikike ya karịa ndị otu egwuregwu ibe ya.
Mgbe ọ nọrọ afọ ise, Haris Seferovic na ọkọchị nke 2004 hapụrụ ụlọ klọb maka ụlọ Switzerland ọzọ nke aha ya bụ FC Luzern. Ọzọ, ọ gara n'ihu na-eto ngwa ngwa n'obere ndị ntorobịa n'afọ atọ ya na klọb. Nke a mere ka o nwee mmalite dị ka ọrụ.
Haris Seferovic Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Akpanwu akwukwo akuko
Afọ 2009 hụrụ Haris na-emere onwe ya aha. Nke mbu, ndi ulo oru Switzerland nke Grasshopper tiri ya ma nweta ya nke oma na 26 nke Eprel 2009.
N’oge nke abụọ na otu afọ ahụ, a kpọrọ nwatakịrị nwanyị ahụ ka ọ nọchite anya obodo ya na FIFA U-17 World Cup, njiri egwu nke wetaara ezinụlọ ya nnukwu ọ joyụ.
Haris Seferovic Ndụ Ọrụ Ndụ
FIFA U-17 World Cup nke weere ọnọdụ na Nigeria bụ asọmpi mkpebi siri ike maka Haris Seferovic na-eto eto.
You maara… Haris Seferovic gbara mgbaru ọsọ na-emeri Nigeria megide ikpeazụ. Ihe ngosi a nyeere ndi otu ya aka inweta ugwu di egwu.
Okporo Harzọ Haris Seferovic na Akụkọ. Ebe e si nweta ya OltnerTagblatt
Haris Seferovic akwụsịghị ebe ahụ. Ọ gakwara n’ihu nweta mmeri nke otu egwuregwu bọọlụ n’afọ.
Haris Seferovic Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Na-ewu ewu Akụkọ
Nanị otu afọ mgbe asọmpi ahụ gasịrị, Haris nwere oké ọchịchọ malitere inweta onyinye sitere na klọb ndị a ma ama na Europe niile. Na 29 Jenụwarị 2010, Serietali Serie A bụ Fiorentina bịanyere aka na ya site n'aka Grasshopper dị obere. Na 11 July 2013, Seferović gara n'ihu isonyere Real Sociedad na-enwe olileanya na ha ga-enwe ọfụma megide Real Madrid & Barca.
N'inwetaghị ihe ọ chọrọ, ọ kwagara German German Bundesliga Eintracht Frankfurt ebe o nyeere ndị otu ya aka ịbụ onye na-agba ọsọ na mkpọsa DFB-Pokal.
Haris Seferovic mechara chọta ụda ya mgbe ọ sonyeere Benfica, klọb ọ ghọrọ akụkọ ọdịmma maka ebumnuche ya.
Haris Seferovic Rise to Akụkọ Ama
Ị maara… Haris Seferovic kụrụ otu ihe na-emebi emebi n’oge Jenụwarị 2019, oge ọ ghọrọ nwa oge n’egwuregwu bọọlụ kachasị elu nwa oge.
Oge 2018 / 2019 dị ịtụnanya ya na Benfica hụrụ ya ka ọ na-eme elu ma dị ike n'ihi ihe mgbaru ọsọ 23 ya site na ngosipụta 29 na Portuguese. Haris Seferovic gara n'ihu na-emeri 2018.2019 Primeira Liga bụrụ onye na-achọ ihe mgbaru ọsọ kachasị elu nke asọmpi ahụ.
Haris Seferovic Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Ndụ mmekọrịta
Tomata ihe omuma banyere Haris Seferovic Love Story ga - enyere gi aka inweta ihe omuma banyere ya. Na-amalite, n'azụ ụdị egwuregwu ọ bụla na-aga nke ọma, enwere nwunye na-adọrọ adọrọ ma ọ bụ enyi nwanyị. Nke a, na nke a, a na-ahụ ya n'ọmarịcha mmadụ nke Amina.
Haris Seferovic na ịhụnanya ndụ ya, Amina
Ma Haris na Amina enweela mmekọrịta siri ike e mebere enyi na enyi ruo ọtụtụ afọ. Dịka ndị nta akụkọ siri kwuo, akụkọ ịhụnanya ha weghaara ha site n'ọrịa ọjọọ gaa na nke na-anọchite anya ezi ịhụnanya.
Haris Seferovic na Amina- Enyi kacha diri ezigbo ima
Na 2019 nke mbu, Haris na Amina kpebiri ime mkpebi ike. Ndị hụrụ ha n'anya kpebiri ime agbamakwụkwọ di na Switzerland. Usoro iheomume nke agbamakwụkwọ ahụ dabara nke ọma n'oge Haris Seferovic super-enwe ihe ịga nke ọma.
Weddingbọchị Agbamakwụkwọ Haris Seferovic
Na-anọnyere oge ọkwọ ụgbọ mmiri n'ụsọ osimiri, oriri agbamakwụkwọ ha na-adọrọ adọrọ nke mere n'ụlọ ezinụlọ Seferovic. Dị ka n'oge edere, Haris Seferovic nwere obi ụtọ ugbu a na ụbọchị ikpeazụ nke ezumike tupu ịlaghachi ọrụ maka oge 2019 / 2020 na-abịanụ.
Haris Seferovic na Amina na-ekpori ndụ n’ụbọchị ikpeazụ nke oge ezumike 2019
Ọzọkwa dị ka n'oge edere, ndị hụrụ abụọ n'anya na-atụ anya nwa mbụ ha (nke a na-atụ anya na September 2019) afọ ime mere ozugbo ha gbasịrị akwụkwọ.
Haris Seferovic Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Ndụ nke Onye
Tomata Haris Seferovic ndụ onwe ya pụọ ​​na egwu egwuregwu ga-enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma.
Bido, a na-ekwu na odighi iguzosi ike n'ihe hapụrụ egwuregwu nke ugbu a. Nke a anaghị eleba anya na mmekọrịta dị n'etiti Haris Seferovic na nkịta ya.
Ndụ nkeonwe Haris Seferovic. Ebe e si nweta ya IG.
N'ebe a na-egwu egwu, Haris Seferovic guzobere onye na-eguzosi ike n'ihe, nke nwere ọmịiko, nkà, na ọgụgụ isi. Ọ dị nwayọ ma na - enweghị oke nọnyeere onye ya na ya na - eme ihe nkiri.
Haris Seferovic Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - LifeStyle
N'akụkụ kachasị, Haris Seferovic na-echekarị ego karịrị akarị. N'ime ọtụtụ afọ, ọ nwetala ọtụtụ nkwekọrịta na klọb ndị Europe na-akpata ọtụtụ ego na usoro ahụ.
Haris hụrụ n'anya na-emefu nnukwu ego na obere echiche. A na-ahụ ihe àmà n'ime ụgbọ ala ya dị oke ọnụ. N'ikwu okwu banyere ụgbọ ala, Haris Seferovic nwere ụfọdụ ụdị ndị kachasị ọnụ na ọnụ.
Isgbọala Haris Seferovic. Ebe e si nweta ya IG
Ihe kachasị amasị ya bụ ụgbọ ala Porsche nke nwere otu n'ime ụlọ kacha mma n'ime ụlọ ọrụ ụgbọala.
Cargbọala Haris Seferovic. Ebe e si nweta ya Emepe Emepe
Dị ka n'oge edere, ụgbụ ọnụ ọnụ ahịa nke onye ọkpụkpọ Switzerland amụbawo ma nọgide site na akara mkpụrụ ọnụọgụ 6 ruo 7. Maka Haris, a na-enwe ego mgbe niile maka ndụ ebighi ebi. Ihe ịga nke ọma ọ na-enwe na ego nwere njikọ chiri anya na ọrụ ọ na-agba ọsọ egwuregwu.
Haris Seferovic Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Ndụ Ezinụlọ
Ezinaụlọ Seferovic na - aghọrọ uru dị na ịnweta otu nke ha na-eweta ọ joyụ na obi ụtọ na ihu ha.
Banyere Haris Seferovic Nna: Hamza Seferovic mụrụ na bred na Bosnia. Na-ekpe ikpe site na akụkọ dị na ntanetị, o yiri ka ọ nwere mmetụta dị ukwuu na mkpebi nwa ya nwoke na mbụ. Ihe osise a mere ka nna na nwa nwoke bụrụ ezigbo ndị enyi.
Nwa Haris Seferovic na nna ya- Hamza Seferovic. Ebe e si nweta ya 20Min
Banyere Haris Seferovic nne: Sefika Seferovic bụ nne Haris Seferovic. Dịka di ya Hamza, Sefika anaghị atụfu ohere nke ịhụ Haris na arụmọrụ ọkachasị mgbe ọ na-egwu maka ndị mba. N'okpuru ebe a bụ foto nke ịga otu n'ime egwuregwu nwa nwoke ọ bụla.
Nne Haris Seferovic
Nwanne Haris Seferovic: Haris Seferovic nwere nwanne nwoke aha ya bu Adis Seferovic. Mgbe ọ na-agwa Switzerland TeleTell, Adis kwuru na ya nwere nnukwu nganga na nnukwu ihe nwanne ya rụzuru na-ele anya i emuomi ya. Dika edere n’oge edere, onweghi ihe omuma banyere Seferovic inwe nwanne nwoke ma obu nwanne.
Nwanne Haris Seferovic- Adis Seferovic
Dika edere n’oge edere, onweghi ozi banyere Haris Seferovic inwe nwanne nwoke ma obu nwanne.
Nne na nna ochie Haris Seferovic: Ọ bụụrụ m ihe ọ soụ ịhụ nne na nna gị ochie ka dị ndụ karịchaa mgbe ị mere ya na ndụ. Nne nne Haris Seferovic ka dị ndụ n’oge edere ede. Ọ bụ nnukwu nwa nwa nwa ya, ihe mere na-ewetarakwu ndụ na agadi ya.
Nne nne Haris Seferovic
Nwa nwa ya anaghị arụ ọrụ ọzọ na-agụ akwụkwọ akụkọ nke na-eto nwa nwa ya. N'okpuru bụ foto nke o nyere ya na otu n'ime mpempe akwụkwọ egwuregwu ahụ.
Ochie nne Haris Seferovic- Onye choro ya nke ukwu
Ndị ikwu Haris Seferovic: Haris nwere nwa nwanne nwanyị aha ya bụ Seila. Dabere na akụkọ, o gosipụtara na ọ nọ ya nso dị ka nwunye ya nwanyị Amina.
Haris Seferovic Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Eziokwu efu
Ihe omume Kwesiri Ncheta N’afọ ahụ A Mụrụ ya:
Haris Seferovic Eziokwu Ezighi ezi- Afọ ahụ ka amụrụ ya. Ebe e si nweta ya amazon na Teen na-ekwu okwu
Afọ a mụrụ Haris Seferovic gbapụrụ na mwepụta nke ụfọdụ ihe nkiri kachasị mma na ihe nkiri nke afọ iri. N'afọ ahụ 1992 hụrụ fim ndị ama ama “Aladdin, ""Nwanyị Nwanyị, ”“ Na Nchebe, ”Na“Nanị ulo 2: Agbafu na New YorkỊbụ onye a tọhapụrụ.
Ị maara?… N'afọ ahụ hụkwara “Barney & Ndị Enyi”Ịbụ nke a na-etinye na telivishọn.
Haris Seferovic Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị Dị Ndụ - Video Nchịkọta
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ akụkọ nwata anyị Haris Seferovic gbakwunyere Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.